सधैँ मोबाइलबाटै पढ्छु भन्ने छोरीको मोबाइल हेर्दा बाबुआमाको हो’स उ’ड्यो ! गर्थिन यस्तो ह’र्कत – – Life Nepali
सधैँ मोबाइलबाटै पढ्छु भन्ने छोरीको मोबाइल हेर्दा बाबुआमाको हो’स उ’ड्यो ! गर्थिन यस्तो ह’र्कत –
सामाजिक सञ्जा’ल र प्रविधिमा अहिले युवा पुस्ता निकै ब्यस्त हुन्छन् । सामाजिक संजाल र प्रविधि विना युवाले अहि’ले जिवनको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । अहिले लकडाउनको समयमा इन्टरनेट सबैभन्दा नजिकको साथी भएको छ । सबै इन्टरनेटको प्रयोग गरेर सामा’जिक सञ्जाल र अनेक गेममा भुलीरहेका हुन्छन् । इन्टरनेटको माध्यम’वाट खेलिने गेम’को लतमा धेरै युवा युवती फसेका छन् । उनीहरुलाई त्यो लतवाट बाहिर निकाल्न नसकेर अभिभावक हैरान भएका छन् । जति’वेला पनि गेममै ब्यस्त हुने बाल’बालिका र युवायुवतीहरु असामाजिक बनिरहेका छन् ।
उनीहरुलाई घर वरपरको वाता’वरणमा के भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा छैन । गेमको लत यस्तो सम्म हुन्छ की मानिस’ले कसरी ब’र्बाद हुँदैछु भन्ने पनि थाहा पाउँदैन । हालै पब्जीका कारण एक युवाले आफ्नो बुवा आमाको सम्पत्ती पनि स्वा’हा बनाइदिएका छन् । भारतमा कति’पय राज्यमा पब्जीला’ई बन्देज गरिएको छ । युवायुवती वि’ग्रन थाले भन्ने गुनासो आएपछि भारतमा केही राज्य’मा पब्जी खेल्न प्रतिबन्ध लगा’इएको छ ।
भारतको पन्जा’बमा एकजना किशोर पब्जीको लतमा यति नराम्रोसँग फसेछन् कि उनले पब्जी खेलेरै बाउआ’माको २७ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको पैसा स्वाहा पारिदिए । छोराले त्यती धेरै रकम पब्जी’मा उडाउँदा पनि आमा’बुवाले थाहा पाएनन् । समा’चार अनुसार इन एप पर्चेजेज तथा अपग्रेडिङका लागि मात्र १६ लाख भारु रुपैया खर्च गरिदिए । बुवा आमाले चलाउ’ने बैंकको एकाउण्ट पनि इन्टरनेट मार्फत पहुच बनाएका उनले त्यती धेरै र’कम स्वाहा पारिदिएका हुन् ।
उनले पढ्नको लागि भन्दै मो’वाइल चलाएको आमाबु’वालाई बताउने गरेका थिए । पब्जी मोबाइलको इनएप पर्चेजेज’का अलावा उनले गेम खेल्ने क्रममा खेल्ने साथी’हका लागि समेत अपग्रेड किनिदिने गरेका थिए । जब ती किशो’रका बाबुआमाले आफ्ना बैंक अका’उन्टबाट १६ लाख भन्दा धेरै भारु खर्च भएको देखे तब उनीहरुको होसहवास उड्यो । पछि त्यसको अनुसन्धान गर्दै जाँ’दा छोराले नै यस्तो बद’मासी गरेको खुलेको थियो ।
ती किशोरले आफ्नै आमाको मोबाइ’लबाट पब्जी गेम खेल्दथे । जब गेमका लागि आव’श्यक रकम बैंक’बाट तिर्दा प्राप्त भएको मेसेज आउथ्यो त्यो आमाले थाहा नपाउनु भनेर डि’लिट गरिहाल्थे । जसका कारण उनका बाबुआ’मालाई छोराले त्यस्तो’ कृत्य गरिरहेको पत्तो थिएन । सर’कारी जागीर गरेर बल्लतल्ल उनीहरुले छोराकै भविष्य र औषधि उपचारका लागि त्यो पैसा जम्मा गरे’को बताएका छन् । – ताजा खबर
Previous भा’रतीय हे’लि’कप्टर नेपालले खसा’लेको भन्दै सा’माजिक स’ञ्जालमा ह’ल्ला, यस्तो छ वा’स्तविकता”
Next दु’खद खबर : सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोबाट २ जानको ज्या’न गयो ! १८ जना वे’पत्ता”